Iindaba -Izixhobo ze-locsmith-9in1 HUK auto lockpick
Izixhobo ze-locsmith-9in1 HUK auto lockpick
Nye; I-Auto Lockpick 9in1 yokuvula umgaqo; (Ithambile kwaye inzima)
Kwithiyori, iqhekeza ngalinye lokutshixa kufuneka licofiwe (ngamanye amaxesha liya kuvulwa ukuba alicofwanga, kusenokwenzeka ukuba libangelwa kukuchaneka kokusebenza)
Xa ukhomba ifilimu ngentsebenziswano yesibane se-fiber optic, sebenzisa ukucofa ukuvavanya. Ifilimu iya kucofa ukuba kunzima, kwaye ifilimu ayizukucofa ukuba iyamelana. (Ukungahambisi kuthetha ukuba i-cleat iyasebenza, ukushukuma kuthetha ukuba i-cleat ayisebenzi)
Kwinkqubo yokuvula, kufuneka kuphela ukuba ucinezele iqhekeza lokuthwala elinamandla ukuze ufumane okuthambileyo kunye nobunzima (fumana ubunzima phakathi kwamaqhekeza amaninzi kwaye ucofe)
Mbini; ukusebenzisana nesixhobo sokhetho,
I-1 yokugaya isicaba;
A. Ezinye iifilimu azinakubonwa ngokucacileyo ngaxeshanye, kwaye kunzima ukuzicofa. Ngokukodwa zizitshixo ezisikiweyo. Emva koko sebenzisa inaliti ethe tye ukuvavanya ngobunono kwaye utshatise ama-45 amabini. Ngokukodwa xa le ikhoyo ikwifilimu ephezulu kwaye eyesibini yeyefilimu esezantsi xa kuvulwe iqhaga (umzekelo, xa isiqwenga sangaphambili se-NSN14 sisiqwenga sesi-4 kwaye isiqwenga esilandelayo sisi-1 ), inaliti ethe tye kunzima ukuyikhomba ngeli xesha, ke kuya kufuneka uhambe nama-45 ukuya kwalatha. I-cleat ehambelana nayo
(Okukhona ungena ngaphakathi, kokukhona kunzima ukujonga) Eyona ndlela kukuqale ukolule inaliti ethe tye uye ngaphakathi, ucofe onke amaqhekeza, uze ukhuphe kancinci inaliti ethe nkqo, ukuze ukhangele ukuphakama kwesiqwenga sokutshixa kunye nenani lamaqhekeza (hayi Qiniseka ukuba unokuxhomekeka kwisandi seplati yokutshixa ukumamela) ukuqonda.
B, kukwakho nomgubo ocolekileyo okhethekileyo (ToY43 kunye TOY43AT) ngenxa yeempawu zesakhelo, ndicinga ukuba kufuneka ihambelane nenombolo 67
Iimpawu ze-TOY43 (zahlulahlula iziqwenga zizonke kwaye uzifake kwisitshixo esinye sokutshixa-isiqwenga, kunzima ukucofa iziqwenga ngaxeshanye ngenaliti ethe tye okanye ngentsimbi ye-45)
Iimpawu ze-TOY43AT, (ipleyiti yokutshixa ikwimo ye-trapezoid, kwaye kukho ubambo oluchasayo ngaphakathi kwesitshixo, esikhusela isixhobo ukuba singangeni, esonyusa ubunzima)
Ngeli xesha, ndicinga ukuba kungcono ukusebenzisa icala elongezelelweyo leNombolo 67 ukucinezela amaqhekeza okanye ukunqanda iimbambo ezichasayo ukukhawulezisa ixesha lokuvula.
2 Vula yokugaya ngaphakathi imoto lock ezifana (HU66 HU100 HU92 ,,,)
Ngaphantsi kokukhanyiswa kwesibane sebhondi, sinokujonga ngokuthe ngqo uninzi lweepleyiti zokutshixa, kwaye sinokubona ngokubonakalayo amandla eepleyiti zokutshixa.
Ukuba ifilimu iyaqhubeka noxinzelelo, zimbini izinto ezinokwenzeka.
A, uBo Tsai wanqwala ifilimu kakhulu. Ngeli xesha, izixhobo ze-Y kufuneka zikhululwe kancinci. Ukuthintela ezinye ii-cleats ukuba zingatsiba phezulu, sizama ukubuyisa umva kangangoko kunokwenzeka.
B, ipleyiti yokutshixa ayikakhululwa okwangoku (qhubeka ucofe ipleyiti yokutshixa)
3 Vula isitshixo sangaphandle semoto yokugaya efana (HU101 HHU64)
Elona candelo linengxaki kolu hlobo lwesitshixo luloyiko lokunqakraza ngaphezulu iqhekeza lesitshixo (iqhekeza lokutshixa alinakubuyiselwa umva njengokutshixa kwangaphakathi), ke kuya kufuneka unikele ingqalelo xa uvula olu hlobo lwesitshixo
A; Lawula umgama oshukunyiswa yiPozi ixesha ngalinye ukunqanda ukucinezela iindawo ezikufutshane
B; Umkhosi wokucinezela isiqwenga sokutshixa kufuneka usetyenziswe kancinci ukuphepha ukucofwa kwesiqwengana sokutshixa
C; Xa kuphela iziqwenga zokugqibela ezi-1 nezingama-2 zigxininisiwe, zama ukusebenzisana no-89 ukucinezela ukunqanda ukonakala kwesixhobo
Ezi ngcebiso zingasentla zezi:
Indawo yokugaya imoto e-Flat 1. 2.4.5 Ukusila kwangaphakathi 1.3.8.9 Ukusila kwangaphandle; 1.3.8.9
Ukongeza, uNombolo 2 (vula ubume obuphezulu kunye nobezantsi, ithontsi akufuneki libe likhulu kakhulu kwaye nezine zangaphandle. Kungcono usile umngxunya omncinci kumacala aphezulu nasezantsi ukunqanda ukutyibilika xa i-chip icofiwe. inefuthe elimangalisayo kwiMercedes-Benz HU39 endala, iBMW, HU58, Volvo, NE66 kuba ezi zitshixo zongezwa entwasahlobo. Crude)
Ntathu; uyisebenzisa njani ifayili eyiY ngokuchanekileyo
Kwinkqubo yokuvula kunye nokongeza amandla, izixhobo ze-Y zisetyenziswa kancinci. Sukongeza esiphelweni. Oku kuyakwenza ukuba ipleyiti yokutshixa yomelele kakhulu kwaye kube nzima ukuqala ipleyiti yokutshixa. Ukuba ipleyiti yokutshixa icinezelwe ngenkani, isixhobo sinokonakala kwaye ipleyiti yokutshixa inokucofa.
Xa ifilimu yokutshixa icofiwe kwaye ifuna ukuba idlalwe kwakhona, inkqubo yokudlala iyacotha. Ngaphandle koko, ezinye izitshixo ezikhutshiweyo ziya kuwa. Ke ngoko, nokuba ivuliwe okanye iyadlalwa, iyasebenza kancinci. Xa ifilimu ifikelela kwinqanaba elifanelekileyo, ifilimu iya kwahluka ngokwendalo.
La mabinzana alandelayo asekwe kulo mzobo ungentla njengomzekelo;
Inombolo 1; inaliti ethe nkqo (inokuvula ngokukhawuleza naluphina ucango lwemoto olungeyiyo intsika esecaleni, ingqikelelo kukuba ithontsi akufuneki libe likhulu kakhulu. Ukuba idrophu inkulu kakhulu, intsebenziswano yezandla zombini inobuqili kwaye indlela yokuvula iyasetyenziswa ukwandisa ixesha lokuvula)
Inombolo 2; intloko engqukuva (vula isakhiwo esingaphezulu nesezantsi, ithontsi akufuneki libe likhulu kakhulu kwaye ezine zangaphandle, kungcono usike umngxunya omncinci kumacala aphezulu nasezantsi ukuthintela ukutyibilika xa ichip ibonwa. Inefuthe elimangalisayo kwiMercedes-Benz HU39 endala, iBMW HU58, iVolvo NE66 kuba ezi zivalo ngokwazo zintwasahlobo)
Inombolo 3; Umhlakulo (vula zonke iintlobo zokutshixwa ngaphakathi nangaphandle okufana neMercedes-Benz kunye neBMW, kubandakanya iMercedes-Benz endala kunye neBMW (kuyacetyiswa ukuba usebenzise umhlakulo kwinqanaba lokuqala ukutshintshela ku-Nombolo 2 kwinqanaba elizayo) TOY2 Toyota Ukugaya ngaphakathi imikhondo emibini ayinakuvulwa ngomhlakulo (isithuba sincinci kakhulu, akukho Nombolo 1 igobile ukuvula), uthotho lwe-BYD TOY2 lunokuvulwa ngomhlakulo!
45; IHorseshoe (enye ephezulu nezantsi, nenombolo 1 yokuvula indawo yokuncedisa kunye nethontsi enkulu, akukho. 1 no-2 inokusetyenziswa ukuba idrophu incinci, ukuba idrophu incinci, sebenzisa uNombolo 45, enengxaki kancinci. ungangeni ngaphakathi, ngakumbi isitshixo Xa amacala aphezulu kunye asezantsi emlonyeni nganye enefilimu ephezulu)
67; Kunye nembadada yehashe esecaleni (kunokuthiwa inyukile kwaye iphantsi okanye kunokuthiwa kusezantsi ngasekhohlo nangasekunene, ngokuvulwa kokuqala okuncedisayo kwe-TOY43AT kuthotho lokhiye kunye ne-TOY43 yokutshixa uNombolo 4, iziqwenga ezi-7 (iziqingatha ezibini ezifanayo lock slot) kunye (ukuthintela ukunqakraza kuphela kwisiqingatha sesitshixo sokutshixa)
89; Ifosholo esecaleni (ukunceda ekuvuleni izitshixo zasekhohlo nasekunene, kodwa kunye nesitshixo esincinci (njenge-HU64 HU101) xa kuvulwa ngokukhawuleza, sisincedisi esilungileyo sokongeza amandla)
Isishwankathelo: Ukuba isixhobo sisetyenziswe kakuhle ngesibane se-fiber optic, sinokuvula nasiphi na isitshixo seminyango engeyiyo intsika esecaleni. Inkqubo yokuvula ifuna ukusebenzisana kwezandla zombini. Sukucinezela ngenkani